၁။ အမှား တစ်ခုကျူးလွန်လိုက်မိမှန်း သတိထားမိတာနဲ.ပြင်ဖို. ချက်ချင်း ကြိုးစားပါ တစ်ခါ တစ်လေကျ မှားမှန်းသိလျက်နဲ. ဇွတ်တိုးမိတတ်တာလည်း လူ.သဘာဝ တစ်ခုပဲ။ မှားမှန်းသိသိချင်း ပြင်ဖို. ဆိုတာကလည်း ခက်ခဲတဲ. အလုပ်တစ်ခုပါပဲနော်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ ပြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော. နေပျော်တဲ. ဘဝလမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်ရောက်လာပါ လိမ်.မယ်။
၂။ ကိုယ်လိုချင်တဲ. အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို ရဖို.အတွက် ကိုယ်ဘာတွေ ပေးဆပ်ခဲ.သလဲဆိုတာနဲ.ပဲ ကိုယ်.အောင်မြင်မှုကို တိုင်းတာပါ။ ကျနော်တို. အားလုံးဘဲ သိကြမှာပါ ကျနော်တို. ဖြတ်သန်း လာခဲ.ရတဲ. ဘဝတွေကို ပြန်လှည်.ကြည်.လိုက်ပါ ပေးဆပ်မှုတွေ အများကြီး နဲ.မှ အတိုင်းအတာ တစ်ခုကို ရောက်ခဲ.ကြတာပါ။ ထောင်ထားတဲ. လှေကား တစ်ခု ပေါ. ဗျာ အလယ်အလတ်လောက်မှာ ရောက်နေတဲ. အချိန်ပေါ. အထက်ကို ဆက်တက်ဖို. အင်အားမပြည်.သေးရင်လည်း နားနေလို.ရပေမယ်. အောက်ကို ပြုတ်ကျသွားရင်တော. ဆက်တက်ဖို.ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တော.ပါဘူး ။ အောက်ကို ကျသွားတဲ. ဒဏ်ရာ တွေကို သာ ကုစားဖို. ဘဲတတ်နိုင်တော.မှာ ဖြစ်ပါတယ်.- ရောက်ခဲ.တဲ. ပန်းတိုင်လေးတွေကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းကြဖို. လိုအပ်ပါတယ်။
Posted by မောင်မောင် at 14:10